नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न सक्षम हुनेछ : प्रतापसिंह लामा, महासमिति सदस्य, नेपाली कांग्रेस - Yugantar Khabar | News Portal
Posted on July 19, 2021 by Basanta Pariyar
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आफ्नो कार्यभार पूरा
गर्न सक्षम हुनेछ : प्रतापसिंह लामा, महासमिति सदस्य, नेपाली कांग्रेस
प्रताप सिंह लामा नेपाली काँग्रेस नुवाकोटका सक्रिय युवा नेता तथा महासमिति सदस्य हुन् । सामान्य किसान परिवारमा हुर्केबढेका उनी मिलनसार, सहनसील र सबैसंग मिल्न सक्ने स्वभावका हुनुको साथै आफुले आँटेको र जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक पूरा गर्ने गरेको सुनाए । सुरुदेखि नेपाली काँग्रेससंग प्रभावित भई साधारण सदस्यबाट राजनीति सुरु गरेका उनले लोकतन्त्रमा विस्वास राखी निरन्तर देश, जनता र पार्टीको सेवा गर्दै आएको बताउँछन् । राजनीतिमा लाग्ने प्रेरणा मेरो बुबा र जिल्लाको तत्कालिन स्थानीय नेताहरुको प्रभाव र पछि विपी, कृष्ण प्रसाद भटराई, गणेशमान सिंह, गिरिजा प्रसाद कोइराला लगाायतलाई पनि बुझने अवसर पाएं । मेरो बुबा दुई पटक वडा अध्यक्ष हुनुभएको थियो । पञ्चायती राजनीतिक परिवारमा हुर्कनु भएको तपाई कसरी कांग्रेस ? साँञ्चै म राजनीतिक सामाजिक पविारमा हुर्के, बढेको हुं । २०३८ सालतिरको कुरा हो साविकको जिलिड ८ नालागाउँमा प्रहरीले एक जना जनताको घरमा गई थाममा बाँधी कृषकको कुखुरा काटेर खाए । त्यसपछि पञ्चायतअन्यायपूर्ण रहेछ, निरंकुश रहेछ, अब रहनुहुंदैन भन्ने मेरो सोच बन्यो । त्यसरी पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा जोडिए । त्यतिबेलैदेखि जिल्ला कांग्रेसका नेताहरुसंग राम्रो सम्बन्ध थियो, त्यसले राम्रो गर्यो मलाई । शिक्षक आन्दोलनमा लाग्ने क्रममा ०४३ सालमै नुवाकोटको विदुरमा ६ दिन थुनामा परें । ०४६ सालको जनआन्दोलनमा अग्रपंत्तिमा रहेर सहभागी भएं । प्रकाशचन्द्र लोहनीले सबैतिर बिजुली पठाउने काम गरे तर हाम्रो घर एरियामा कांग्रेस भएका कारण दिएनन् बहुदल आएपछि बिजुली लाने काममैले नै गरें । अरु धेरै विकासका कामहरु गरियो, अहिले पनि गरिरहेकै छौं । केकुसित करांतेका खेलाडी, सामाजिक सेवा हुंदै हाल पुरै राजनीतिमा सक्रिय रहेको छु । साथै राजनीति तथा समाजसेवामा आफु भनेर आउनेलाई हमेसा सहयोग गर्दै आएको छु हामीसंग कुरा गर्दै भने । उनी पार्टीको एक इमान्दार सिपाही हुन् भन्दा फरक पर्दैन । नेपाली जनताले दुई तिहाई मत दिएर कम्युनिष्टहरुलाई सत्तामा पुर्याए तर देश र जनताको लागि केही गर्न सकेनन् । पार्टीभित्रकै झगडाका कारण देखाउँदै दुई पटकसम्म संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक काम गरिरहे । अहिले
परिस्थितिले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । नेपाली कांग्रेसले नै आजसम्म राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्दै आएको छ ।पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरण विवाद टुंगिएको छ । जिल्लामा पार्टीका नेताहरुबीच एकता हुन नसक्दा त्यस्तो अवस्था देखा परेको हो । एकाध चुनावहरुमा पराजित भएपनि पार्टी कमजोर छैनौ ।अहिले हामीले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुको साथै संगठन मजबुत बनाउने अभियानमा छौं । पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा त्यो संकल्प गर्छौं ।
नजिकिदै गरेको महाधिवेशनमा तपाईको दाबी के हो ? भन्छन्, मेरो चाहना महाधिवेशनबाट नगर र स्थानीय प्रदेश बाहेकमा मेरो दावी रहनेछ । जिल्ला पार्टीको नेपाल तरुण दलको संस्थापक सदस्य र तीन कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य भएर काम गरिसकेको छु । पार्टी भित्र छलफल भईरहेको छ र हुन्छ । पार्टीले मेरो आवश्यकता ठान्छकि ठान्दैन त्यसमा भर पर्दछ । अग्रज नेता, कार्यकर्ता तथा प्रतिनिधिहरुले जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु । अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।नुवाकोटमा पार्टीले चुनाव हार्नुको मुख्यतः तीन वटा कारण रहेका छन् । पहिलो वाम गठबन्धन, टिकट वितरण विवाद रहित हुन नसक्नु, अर्का काँग्रेसको एउटा रोग सबैलाई थाहा छकि पार्टीभित्रकै अन्तरघात । टिकट वितरणमा एकरुपता नहुंदा चुनावमा केही कमजोर भएका छौं । तर ठोकुवाका साथ भन्छु यदि वाम गठबन्धन मात्र थिएन भने प्रतितिधिसभा र प्रदेश पुरै सिट जित्थ्यौं । अबको चुनावमा कांग्रेसको जितलाई कसैले रोक्न सक्दैन । स्थानीय तहमा हामी बलियो छौं । आगामी दिनमा झन बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन्छौ ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा निर्वाचनमा पार्टीको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगको बन्द सुचीमा मेरो नाम थियो । ६२ नम्बरमा मेरो नाम थियो । मेरो अनिवार्य जस्तै थियो, ६३ नम्वरवाला सभासद बने, मलाई सबै तिरबाट बधाई आदनप्रदान त भयो तर
विडम्वना सम्भव भएन । २०७४ सालको स्थानीय तह चुनावमा बेलकोटगढी नगरपालिकामा मेयरको लागि उम्मेद्धारी दिए तर अन्तिम समयमा यादव नेपालको नाम प्रकाशित भयो । मैले सहर्ष स्वीकारे । पार्टीले टिकट बाँड्नमा चलखेल गर्यो, इमान्दारपूर्वक पार्टीले पठाएको उम्मेद्धारलाई सघाए । तर चुनाव हारियो, एमालेले जित्यो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा पनि प्रदेशमा अनिवार्य जस्तै थियो टिकट तर त्यहाँ पनि चलखेल भयो
टिकट पाईन । म एउटा कुरा दावीका साथ भन्न चाहन्छु कि मेयर वा प्रदेशसभा जुनसुकैमा चुनाव जित्नेवाला उम्मेद्धार थिएं, हुं तर टिकट पाईन । राजनीतिमा धैर्य गर्नुपर्छ, पालो आईहाल्छ , आसावादी छु ।
वाम सरकारले संसद विघटन गरेर देशलाई अनिर्णयको भूमरिमा फसाउंदै थिए तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जोगाईदियो । अदालतको परमादेशद्धारा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ ।सर्वहाराको कुरा गरेर जनतालाई गरिब बनाईरहेका छन् । उनीहरुले
राजनीतिलाई पद र पैसा कमाउने मेलो मात्र बनाएका छन् । विपीले जस्तो संघर्ष अहिले नेता वा तपाई हामीले गर्न सक्दैनौ । तत्कालिन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे । त्यस्तो अवस्थामा पनि कहिंकतै विचलित नभई जिवन पर्यान्त संघर्ष गर्नुभयो । उनैले जन्माएको पार्टी देशको ठुलो प्रजातान्त्रिक पार्टी बनेको छ । त्यस्तो गौरवशाली पार्टीको सिपाही हुन पाउंदा गर्व महसुस हुन्छ । यद्यपी पार्टीले धेरै कुरा सुधार गर्न आवश्यक छ । साथै, अहिलेको राजनीति शुद्धिकरण आवश्यक छ । सबै र सबैलाई अट्ने काँग्रेस बनाउन आवश्यक छ । यसमा नेतृत्वको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
नेपाली काँग्रेसले आफु हारेर पनि संधैं देशलाई जिताउंदै
आएको छ । नेपाली काँग्रेस जन्मेदेखि आजसम्म के कति संघर्ष ग¥यो तपाई हामी सबैले देखे, सुने बुझेकै छौं । २००७ देखि पञ्चायत फाल्ने आन्दोलनदेखि लिएर दुईवटा जनआन्दोलन हुंदै आज देशमा जुन राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, त्यो काग्रेसको कारणले मात्र सम्भव भएको हो । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बनायौं । काँग्रेसले देश र जनताका लागि निरन्तर संघर्ष ग¥यो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा
हार्दैछौं भन्ने थाहा हुंदाहुदै पनि देशले निकास पाउनुपर्छ
भन्ने हेतु सहित गिरिजाप्रसाद कोइरलाले चुनाव गराउनुभयो । ०७४ सालमा पनि शेरबहादुर देउवाले त्यही गर्नु भयो । बल्लतल्ल आएको संविधानलाई कार्यान्वयन र संस्थागत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । आज वाम गठबन्धनले दुनियाँ कुरा गरेर संसदमा दुईतिहाई त ल्याए तर देश र जनताका लागि के गरे त ? संविधान कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ? विभिन्न काण्डहरु कहाँ पुग्यो ? सुशासनमा सरकार कहाँ छ ? तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ । एत्रो कोरोना रोग चलिरहँदा जनताले राहत पाउने भन्दा पनि स्वस्थ्य सामग्री
खरिदमाभ्रष्टाचारमा गरे । त्यसैले हामी कमजोर छैनौ, चुनावमा हारजित त भईरहन्छ ।कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा वैचारिक भन्दापनि नेतृत्वका लागि गुठउपगुठ मात्र भईरहेको छनि ? काँग्रेसभित्रको गुठउपगुठको कुरा उठाउन खोज्नु भएको होला । नेपाली काँग्रेस एक मात्र पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । पार्टीको अधिवेशन भदौमा हुने गरि सबै कार्यतालिका आईसकेको छ । पार्टीमा सबैलाई आफ्नो कुरा राख्ने स्वतन्त्रता सबैमा छ, त्यसैले लोकतन्त्रको लागि आन्दोलनको नेतृत्व ग¥यौं । तर हामी नै अराजक बन्यौ भने यसको फाईदा अरुले लिन्छन् लिईरहेका छन् । यसमा पार्टी सजग बन्न जरुरी छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा जस्तो बोल्नमा बन्देज छैन, हुंदैन । ठुलो पार्टी छ, मनमुटाव हुन्छन्, गुठहरु हुन्छन् । प्रजातन्त्रको सुन्दरता पनि त्यहि हो । आखिर अधिवेशनमा प्यानल हुन्छन्, एउटाले जित्छ, अर्कोले हार्छ । हार्नेले आफ्नो पोजिसन देखाईरहनु ठिकै हालो तर पार्टीलाई घाटा हुने गरी नेताहरु चलिरहंदा आम कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, जनता दुखी हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले आम नेता कार्यकर्ता सच्चिन जरुरी छ । यसमा सवालमा तपाईको प्रश्न ठिकै छ ।